Knowledges Zone: How to install Tomcat?
အားလုံး မင်္ဂလာပါခင်ဗျ။ ကျနော် ဒီနေ့ ဆွေးနွေးချင်တကာ Java အခြေခံရှိပြီး java ဖြင့် web application ရေးသားလိုသူများ အတွက် ရည်ရွယ်ပါတယ်။ ဒီနေ့ ကျနော် အနည်းငယ်ဆွေးနွေးချင်တာ Tomcat Web sever ကို Local host မှာ installation လုပ်ပုံကို ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့ ကျနော် အဓိက ပြောသွားမှာကတော့
(၁) မိမိတို့ ရဲ့  ကိုယ်ပိုင်ကွန်ပျုတာ ပေါ်မှာတင် Install and configure Tomcat လုပ်ဆောင်ပုံ။
(၂) DOS Prompt window မှနေပြီးတော့ start and shutdown Tomcat Web Sever. ကို အတူတူလေ့လာချင်ပါတယ်။
Note: မိမိစက်ထဲမှာ java (JDK) ကို install လုပ်ထားပါ။
အဆင့် (၁) ပထမဦးစွာ ကျနော်တို့ Tomcat web site ( : http://tomcat.apache.org/) ကိုသွား ပြီး tomcat web sever ကိုဒေါင်းလိုက်ပါ။
အဆင့် (၂) ရလာတဲ့ zip file ကို ကိုယ့်ရဲ စက်ထဲမှာ (save) သိမ်းဆည်းလိုက်ပါ။ Default အားဖြင့် ဖိုင်နာမည်သည် apache-tomcat-6.0.10.zip ဆိုပြီးရှိနေပါလိုက်မယ်။
အဆင့် (၃) အထက်ဖော်ပြပါ zip ဖိုင်ကို unzip(extract) လုပ်ပါ။ ပြီးလျှင် extract လုပ်ပြီး ရလာတဲ့ file လေးကို မိမိ စက်ရဲ့system insatall လုပ်ထားရာ drive ဥပမာ(C:\_ ) ထဲကို ကော်ပီ ကူးပြီး paste လုပ်ပါ။
အဆင့် (၄) File name default အားဖြင့် အရမ်းကြီးရှည်လွန်းရင် Rename လုပ်လိုက်ပါ ( apache-tomcat-6.0.10 >>> tomcat) လို့ ပြောင်းလိုက်ပါ။ ခု ဖိုင်နာမည် tomcat ဖြစ်သွားပါပြီ။
အဆင့် (၅) အနေဖြင့် C drive ထဲက Tomcat ထဲကိုဝင်ပါ။ ပြီးရင် Lib ဆိုတဲ့ ဖိုင်လေးထဲကို ၀င်ပါ။ ထို့ နောက် JAR ဖိုင် ဖိုင်တွေကိုတွေ့ ရပါမယ်။ ထို JAR ဖိုင်များထည်းမှ အောက်ပါ JAR ဖိုင်လေးဖိုင်ကို ကော်ပီကူယူပါ။
servlet-api.jar jsp-api.jar el-api.jar
ထို ဖိုင် (4) files ကို သေချာ select လုပ်ပြီး ကော်ပီကူးလိုက်ပါ။ ပြီးလျှင် မိမိစက်ထဲက Java သွင်းထားတဲ့နေရာကို သွားပါ။
ဥပမာ သူငယ်ချင်းရဲ့ စက်ထဲမှာ ( C:\_Program Files\_Java ) ဆိုပြီးရှိပါလိမ့်မယ်။ အဲမှာ JDK1.6.0 ရယ် JRE1.6.0 ရယ် ရှိပါလိမ့်မယ်။
JDK1.6.0 ထဲကိုဝင်ပြီး Jre ဆိုတဲ့ folder ထဲကိုဝင်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် libဆိုတဲ့ folder ထဲမှာ ခုဏ ကော်ပီးကူးထားတဲ့ jar file လေး files ကို paste လုပ်လိုက်ပါ။
(ဒီနေရာမှာ JAR ဆိုတာ Java Archive files ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ မှာ JDK နဲ့ JRE က servlets နဲ့ JSP ဖိုင်တွေကို develop လုပ်ဖို့ အတွက် java classes တွေပါဝင်ပါတယ်။ )
The File Structure of Tomcat
Bin : သူ က tomcat ကို start & shutdown လုပ်တဲ့ဖိုင်လိုမျိုး batch ဖိုင်တွေထားရှိတဲ့နေရာပါ။
conf : က သူမှာ websever manager ရဲ့ password လိုပြင်တာမျိုးတွေ port တွေချိန်တာမျိုးတွေ စတဲ့ ( server.xml, context.xml and web.xml) ဖိုင်တွေ ကို configuring တွေလုပ်ဆောင်ဖို့ ပါ။
lib : ကတော့ JAR ဖိုင်တွေပါဝင်ပါတယ် JAR ဟာ အပေါ်မှာ အနည်းငယ်မိတ်ဆက်ခဲ့သလို web application တွေအတွက်လို အပ်တဲ့ classes ဖိုင်တွေပါဝင်ပါတယ်။
logs : log files တွေပါ။
temp : JVM (Java Virtual Machine) မှ Temporary files တွေ အတွက် အသုံးပြုရန်။
webapps : မှတော့ web application တွေအတွက် directires and files များ။
works : မှာ Tomcat က JPS ဖိုင်တွေအတွက် generates လုပ်ဖို့ Servlets အတွက် source code တွေ classes ဖိုင်တွေ ပါ။
Release-Notes : ကတော့ လောလောဆယ် ထွက်ရှိနေတဲ့ tomcat ရဲ့ အထွေထွေသတင်းတွေပါ။
running.txt : မှာ starting and shuting down စတာတွေလုပ်ဖို့လုပ်ဆောင်ပုံအဆင့်ဆင့်ရေးထားပါတယ်။
ကျနော်တို့နောက်ဆုံးပြင်ဆင်ဖို့ တခုကျန်နေပါသေးတယ် JAVA_HOME environment variable ကြေငြာပေးဖို့ ပါ။
ပထမဆုံး C:\_tomcat\_bin ထဲကိုသွားလိုက်ပါ။
ဒုတိယအဆင့်အနေနဲ့ Catalina. bat ဆိုတဲ့ဖိုင်လေး ရှာပါ။ တွေ့ ရင် right click edit လုပ်ပါ ( Notepad or any textpad ဖြင့်) ဖွင့်ပြီး REM နဲ့ ရေးထားတဲ့
နောက်ဆုံးစာကြောင်းအောက်မှာ Enter တချက်နှိပ်ပြီး စာတကြောင်း ရရယူပါပြီးတော့။
ဆိုတာကို ထည့်ပြီး save လုပ်လိုက်ပါ။
ဒီလို save ပြီးရင်တော့ tomcat ကို stop လုပ်ပြီး restart လုပ်ဖို့ လိုပါတယ်။
ဒါဆို tomcat ကို command prompt မှာ start and shutdown လုပ်နည်းလေးအတူတူလေ့လာကျရအောင်။
Run ကိုခေါ်လိုက်ပါ။ ( windows key + R) သို့ မဟုတ် start Menu မှာ run ပြီးရင် cmd လို့ ရိုက်လိုက်ပါ command prompt တက်လာမည်။
ဒါဆို cd \_tomcat\_bin လို့ ရိုက်လိုက်ပါ။
ခု သူငယ်ချင်းစက်ရဲ့ document and setting ထဲကို default ရောက်နေပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် cd က (change directory ) လို့ ပြောလိုက်တာပါ ပြီးတော့ tomcat ထဲက bin ထဲကိုဝင်ခိုင်းလိုက်တာပါ။ခုက တခါထဲရိုက်ခိုင်းလိုက်တာပါ.။ ( တဆင့်ခြင်းသွားချင်ရင် cd \_ ဆို ရင် C:\_ ထဲကိုရောက်သွားမယ်။ အဲပြီးရင် cd tomcat လို့ ရိုက်ရင် tomcat ထဲဝင်မယ် ပြီးရင် cd bin လို့ ရိုက်လိုက်ရင် bin ထဲရောက်သွားပါပြီ။ဒီလို တွေမရိုက်ချင်လို့ ရှုတ်မှာဆိုးလို့အပေါ်ကလို တကြောင်းထဲရိုက်လိုက်တာပါ။)
bin ထဲရောက်နေရင် startup ဆိုတာနဲ့ဒီလိုလေးပွင့်လာပါမယ်။
ပိတ်ချင်ရင် တော့ shutdown ပါ။
How to viewaweb page via an HTTP URL
1. Tomcat ကို အထက်ကလို run လိုက်ပါ။
2. Browser ကိုဖွင့်လိုက်ပါ။
3. မိမိခေါ်လိုတဲ့ URL ကိုရိုက်လိုက်ပါ.။ ခုတော့ localhost:8080 လို့ ရိုက်လိုက်ပါ။ ဒါဆို local hosting ကျလာပါမယ်။
HTTP URLs that you can use to test Tomcat
Type an HTTP URL into your web browser and press Enter.
အဲလို tomcat ကို run ထားမှ ကျနော်တို့ က browser ကနေ localhost:8080 လို့ ခေါ်လို့ ရမှာပါ။ဒါဆို tomcat ရဲ့ default page ကျလာပါမယ်။ဒီလို run လို့ 8080 Portဟာ အခြား protocal တခုခုနဲ တိုက်နေမယ်ဆိုရင် port ကို C:\_tomcat\_ conf ထဲက sever.xml ထဲမှာဝင်ပြင်ရပါမယ်၊။ ပြင်တာကတော့ port ၈၀၈၀ နေရာမှာ ကိုကြိုက်တဲ့port ပြောင်းလိုက်ယုံပါပဲ။ line No.67 လောက်မှာ ရှိပါမယ်။ ဖြစ်တောက်ဖြစ်ခဲပါ. ကိုယ်ကိုတိုင်ကလဲ default port ကိုမသုံးချင်ခဲ့တဲ့အခါမျိုးမှာတော့ အဲလိုပြင်ဆင်လို့ ရတာကိုသိထားရပါမယ်။)
ကဲအဲလို ၀င်လို့ tomcat ပုံလေးကျလာပြီရင် ဆိုင် tomcat manager ထဲကိုဝင်လိုက်ပါ။ ကဲဒါဆို installation လုပ်တာ အောင်မြင်စွာပြီးဆုံးသွားပါပြီနောက်ပိုင်းတော့ အတူတူ handle လုပ်ကျတာပေါ့ဗျာ။ J2EE နဲ့ အတူတူ web site လေးတွေရေးကြရအောင်လား ဗျာ။။
လိုအပ်တာများရှိခဲ့ရင် ဖြည့်စွက်ပြောသွားပါအုံး ကျနော်လဲ လေ့လာဆဲမို့ ပါ။ အတူတကွလေ့လာချင်း တွေလုပ်ကျတာပေါ့။
မူရင်းဆိုဒ် Mistake 51 Area